အခြေခံဟိုတယ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ by Radio Australia on Apple Podcasts
We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to အခြေခံဟိုတယ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ by ABC Radio Australia, get iTunes now. Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.
အခြေခံဟိုတယ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အသုံးကျမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဝေါဟာရတွေ အသုံးအနှုံးကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ့အပြင် အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုရာမှာ သတိထားရမဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာနိူင်ပါတယ်။
Cleanမီးအလှထွန်းပွဲတော်မှာ (အပိုင်း - ၂)
မိမိကို တစ်ယောက်ယောက်က ချီးကျူးလာရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုရမလဲ၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေကို ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ၊ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမလဲ စတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမမှန်ကြိယာ (irregular verbs) တွေကိုလေ့လာသွားရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် Excuse me. ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ သုံးနိုင်သလဲ၊ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ပြောဆိုရာမှာ အတိတ်နဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanသင်္ဘောပေါ်မှာ (အပိုင်း - ၂)
အင်္ဂလိပ်စကားပြောဧည့်သည်တွေကို အစားအစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကြံဥာဏ်ပေးမလဲ၊ နားလည်မှုလွဲတာတွေရှိနေရင် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Would you like to try …? ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ၊ တစ်ယောက်ယောက်က စကားပြောလာတဲ့အခါ နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင် Could you repeat that please? ဒါမှမဟုတ် Sorry, I didn’t catch that. စသဖြင့် ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ ဆိုတာတွေ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အသုံးအနှုံးတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေကိုလည်း လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanသင်္ဘောပေါ်မှာ (အပိုင်း - ၁)
ဧည့်သည်တွေလုံခြုံ အန္တာရယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဂရုပြုကြဖို့ ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ သူတို့ သက်တောင့်သက်သာရှိမရှိသရအောင် ဘယ်လိုမေးမြန်းမလဲ ဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ နှစ်သက်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ဘယ်လို ညွှန်ပြ ရှင်းလင်းမလဲ ဆိုတာ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဧည့်သည်တွေမှာ မတူညီတဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိကြတဲ့အတွက် ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာကို အကြံပြုချက်တွေနဲ့အတူ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanခရီးသွားလာဖို့ ဆွေးနွေးခြင်း (အပိုင်း - ၂)
ခရီးစဉ်ရေးဆွဲရာမှာ ဘယ်လိုဆွေးနွေးရမလဲ၊ ဘယ်လို အကြံပေးရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အသုံးဝင်တဲ့ စကားစုတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ if your prefer နဲ့ I’ll make the arrangements ဆိုတဲ့ စကားစုတွေသာမက အီဒီယံစကားစုဖြစ်တဲ့ play it by ear ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာသုံးနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုလည်း လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanခရီးသွားလာဖို့ ဆွေးနွေးခြင်း (အပိုင်း - ၁)
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်သည်တွေနဲ့ ခရီးသွားလာဖို့ ဘယ်လိုဆွေးနွေးနိုင်သလဲဆိုတာ လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ ဘာလိုအပ်နေသလဲဆိုတာ ဘယ်လိုမေးမလဲ၊ ဘယ်လိုအကြံဥာဏ်ပေးမလဲဆိုတာတွေအပြင် အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြောဆိုမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanခရီးသွားလမ်းညွှန်ခြင်း (အပိုင်း - ၂)
မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ရာမှာ ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်နိုင်သလဲ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်ရာထူးအခေါ်အဝေါ်တွေ၊ ဖောက်သည်တွေကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanခရီးသွားလမ်းညွှန်ခြင်း (အပိုင်း - ၁)
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေမှာ လေ့လာခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီး လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Can I help you? အစရှိတဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စကားစုတွေကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည်တွေနဲ့ စကားပြောဆိုရာမှာ ပိုပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုံးတွေကို ဘယ်လိုသုံးနိုင်သလဲ၊ if you like ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ သုံးနိုင်သလဲဆိုတာ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း (အပိုင်း - ၂)
ဈေးဝယ်သူတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ စဉ်းစားနေချိန်မှာ မိမိအနေနဲ့ စောင့်နေနိုင်တဲ့အကြောင်း ဘယ်လိုပြောပြနိုင်သလဲ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာ take your time ဆိုတဲ့ စကားစုက အသုံးဝင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဖောက်သည်ကို မိမိနဲ့အတူလိုက်လာဖို့ ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ၊ အကြွေးဝယ်ကဒ်အသုံးပြုပြီး ကျသင့်ငွေအတွက် ရှင်းပေးတာကို ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း (အပိုင်း - ၁)
အဝတ်အစားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျသင့်လဲဆိုတာ ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ဈေးဝယ်သူ စမ်းဝတ်ကြည့်လို့ရကြောင်း ဘယ်လိုပြောမလဲ စတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်လာနဲ့ ဆင့်ကို ဘယ်လိုပြောဆိုသုံးစွဲရမလဲဆိုတာနဲ့ Can I help you? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ သုံးနိုင်သလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသားတွေပြောဆိုတဲ့ စကားကို ပိုပြီးနားလည်နိုင်ဖို့အတွက် သြစတြေးလျ ဘန်းစကား အသုံးအနှုံးတချို့ကိုလည်း လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanလမ်းညွှန်ခြင်း (အပိုင်း - ၂)
အငှားကားမောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိကားကို ငှားစီးလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ခရီးသည်တွေကို ဘယ်လို စကားပြောဆိုရမလဲဆိုတာ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ခရီးသည်တေ ဘယ်သွားချင်သလဲဆိုတာ ဘယ်လို မေးမြန်းရမလဲ၊ ကားခ ဘယ်လိုတောင်းရမလဲ၊ စကားဘယ်လို ပြောဆိုရမလဲ ဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ဧည့်သည်တွေနဲ့ စကားပြောဆိုရာမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ပြောဆိုသင့်သလဲ၊ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လိုစကားပြောဆိုကြသလဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanလမ်းညွှန်ခြင်း (အပိုင်း - ၁)
လမ်းညွှန်ပြတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ ဘယ်လို အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာတွေအပြင် တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကမေးလာရင် ဘယ်လိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြရမလဲဆိုတာကိုပါ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကာလခန့်မှန်းပြောဆိုတာတွေပါ လေ့လာသွားမယ့်အပြင် အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာ how about ဆိုတာနဲ့ may I suggest ဆိုတဲ့စကားစုတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ၊ right ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်သလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanစားသောက်ဆိုင်မှာ (အပိုင်း - ၂)
ဧည့်သည်တွေဘာလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာ ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာ လေ့ကျင့်သွားမယ့်အပြင် ငွေရှင်းဖြတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်သလဲဆိုတာကိုပါ လေ့လာသွားရမှာပါ။
Let me see စကားစုကို ဘယ်လိုသုံးနိုင်သလဲ၊ ဧည့်သည်တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေရှိနေတဲ့အခါမှာ or ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်သလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာသွားရမယ့်အပြင်၊ would you like ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယ်လိုသုံးနိုင်သလဲဆိုတာကိုပါ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanစားသောက်ဆိုင်မှာ (အပိုင်း - ၁)
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်သည်တွေမှာ ပြဿနာ တစုံတရာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လို မေးမြန်းစုံစမ်းမလဲ၊ အမှားအယွင်းရှိရင် ဘယ်လို တောင်းပန်မလဲ စတာတွေကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို mix up ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပြီး ဘယ်လိုပြောပြနိုင်သလဲ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့ တခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုတောင်းပန်စကားပြောကြသလဲ ဆိုတာတွေအပြင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော အသံထွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုထားတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း (အပိုင်း - ၂)
ဧည့်သည်တွေ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဘယ်လိုအစားအစာမှာသလဲ၊ ဧည့်သည်တွေကမေးမြန်းလာရင် ဘယ်လို အစားအသောက်ကောင်းတွေ အကြံပေးမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Quite နဲ့ very စကားလုံးတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ၊ ဧည့်သည်တွေ အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာကို ဘယ်လိုမေးမြန်းမလဲဆိုတာတွေအပြင်၊ ဧည့်သည်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသံထွက်မှန်ကန်စေဖို့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဘယ်လိုတောင်းပန်ရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တွေက အကြံဥာဏ်တောင်းခံလာရင် ဘယ်လို အကြံပေးရမလဲ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်သည်တွေကို ဘယ်လိုကြိုဆို ပြောဆိုရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နေရာတစ်ခုနဲ့ နီးစပ်တာကို ဘယ်လို ပြောလို့ရသလဲဆိုတာနဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေရာမှာ ဘယ်လို တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ တုံ့ပြန်ဖြေကြားနိုင်သလဲ၊ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားရာမှာ Yes နဲ့ No ဆိုတာတွေသာမကပဲ ကို လေ့လာသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်ကြိုဌာနမှာ ​​ဧည့်သည်တွေရောက်လာရင်ဘယ်လို​ ​နှုတ်ဆက်ရမလဲ​ ​ဆိုတာကို ​လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ​
Cleanဟိုတယ်တည်းခိုရန် စာရင်းသွင်းခြင်း အပိုင်း (၁)
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ​ဧည့်ကြိုဌာနမှာ ​ဧည့်သည်တွေရောက်လာရင် ​ဘယ်လို ​နှုတ်ဆက်ရမလဲ ​–အခန်းနံပတ်တွေကို ​ဘယ်လို့ပြောရမလဲ ​ပြီးတော့ ​အင်္ဂသဒ္ဒါတွေလည်း ​နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cleanတယ်လီဖုန်းပေါ်က ​အခန်းကြိုတင်ဘွတ်ကင် ​လက်ခြံ
မေးခွန်းထုတ်ရာမှာ ​​' ​နောက်ပြီးတော့' ​​ဆိုတဲ့ ​စကားကို ​ ​​အသုံးပြုပြီးတာ့ ​​ဘယ်လို ​မေးခွန်းတွေမေးနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ ​​တစ်ယောက်ယောက်က​ ​'Thank ​you'​ ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်'လို့ ​ပြောလာရင် ​​ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ​​ဆိုတာတွေကို​ ​လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ​
ဒီသင်ခန်းစာမှာ​ဟိုတယ်အခန်းကြိုတင်မှာတဲ့အခါ​ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ၊ မိမိကိုယ်ကို တယ်လီဖုန်းထဲကနေဘယ်လိုမိတ်ဆက်မလဲ ပြီးတော့ ဧည့်သည်တွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥုးသုမင်္ဂလ - dhamma 2009MgMinView in iTunes
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ်Radio Free AsiaView in iTunes
Burmese News - NHK WORLD RADIO JAPANNHK (Japan Broadcasting Corporation)View in iTunes
Songs on demand of CRI Myanmar serviceCRI Asia WaveView in iTunes
Burmese Evening BroadcastBBC RadioView in iTunes
FreeCategory: EducationLanguage: Burmese© ABC
Pacific BeatView in iTunes